Gịnị stof nwere ike ịchekwa na mobile kaadị ebe nchekwa?
Mobile ebe nchekwa kaadị jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nchekwa ikike na-abụghị nanị nnukwu ke nchekwa size kamakwa obere na nchekwa iji jide n'aka na ohere mgbe na-arụ. Mgbe ọ na-abịa doro ajụjụ mgbe ahụ, ọ dị mkpa iburu n'obi na ọ dịghị ịgba nke data ụdị na nwere ike ịchekwa na na mobile kaadị ebe nchekwa dị ka ọ na-eme n'aka na nchekwa na-eji na kasị mma n'ụzọ na-arụpụta ihe kasị mma maka ọrụ. Ya mere, site foto ọdịyo ndekọ na site na ozi ederede kpọtụrụ nkọwa mkpanaaka kaadị ebe nchekwa nwere ike ime ka n'aka na ndị nile data iche iche na ụdị na-echekwara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Otú ọ dị onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ngwaọrụ kaadị ebe nchekwa na-ahọrọ dị ka kwa flavor nke na ọ e mepụtara na ọ bụ n'ihi na eziokwu na onye ọrụ ga na-enwe ike iji kaadị ebe nchekwa ruo akpan akpan ikike maka ngwaọrụ mkpanaaka na elu nchekwa na ebe nchekwa kaadị ike-eji n'ime ngwaọrụ nke na-adịghị pụtara n'ihi na otu ihe ahụ. Akwụkwọ ntuziaka kwesịrị mere a ga-agụ na-needful results na iji jide n'aka na ngwaọrụ na-pacified na nke a.
Akpata ọnwụ nke faịlụ site na mobile kaadị ebe nchekwa
E nwere ọtụtụ ihe ruru ka nke faịlụ-efu na na kaadị ebe nchekwa ma ọ bụrụ na onye ọrụ bụghị tech savvy mgbe ahụ data adazuwo efu ruo mgbe ebighị ebi. Iji zere ọnọdụ dị otú ahụ ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-akpata nke data ọnwụ na-mara. Na-esonụ bụ ndepụta na obere nkọwa ndị na-akpata na-eduga ọnwụ nke ọmụma na-echekwara na na kaadị ebe nchekwa:
1. ezighị ezi njikwa
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị akpata na-eduga na nke nke data ọnwụ na kaadị. Ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ mgbe niile ejiri kaadị nchekwa na-elekọta ma na na metụtara ntuziaka na-abịa na ọ ga-agụ ya wee na ihe bụ nsogbu mgbe chere ihu onye ọrụ na nke a.
2. Formatting mere kpamkpam
Formatting ọhụrụ ebe nchekwa kaadị iji jide n'aka na ha na-eji n'ime ngwaọrụ bụ mbụ nzọụkwụ na kwesịrị iwere na nke a ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ mere nke a mgbe ahụ, ọ na-ukwuu tụrụ aro. The formatting kwesịrị mere kpamkpam na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na formatting mmanya na dechara. Ọ bụrụ na ọ na-adịghị mere mgbe ahụ na kaadị ga-abụ n'ezie nye mbipụta na n'ikpeazụ.
3. Exposure okpomọkụ na mmiri
Ọ bụ ọzọ a mmadụ njehie nke na-eduga na faịlụ ọnwụ na data ire ure. Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na a akọrọ ebe bụ ebe na kaadị mgbe niile nọ ma ọ bụ echekwara iji jide n'aka na ihe iseokwu banyere ìhè na okpomọkụ na-mgbe chere ihu na onye ọrụ na-ọkọkpọhi data si ochie ebe nchekwa kaadị ma ọ dị mkpa.
Olee otú naghachi ehichapụ faịlụ site Android kaadị ebe nchekwa ekwentị?
Iji nweta ọrụ nke inye ndị Wondershare ọzọ na-abịa na a ọkaibe na ọma reputed omume ga-eme ka n'aka na data na-nwetara na-natara bụrụ na nke ọ bụla ọnwụ. Wondershare Dr. Fone maka Android bụ ihe kasị mma na ndị kasị elu ngwá ọrụ nke ụwa nke na-eme n'aka na needful a mere na-enweghị ọtụtụ hassle dị ka usoro ihe omume dị nnọọ mfe iji na-enwe. Ọ bụ atụmatụ nke usoro ihe omume nke na-eme ya n'elu oke nke ọrụ na Fim pụkwara hụrụ ke ukara website nke Wondershare. E nwere nnọọ ogologo ndepụta nke igwe na na metụtara ụdị na nwekwara ike ike anya na na njikọ http://www.wondershare.com/data-recovery/android-data-recovery-reference.html na ebe a na onye ọrụ nwekwara ike chọọ na ngwaọrụ. N'oge na-adịghị na Wondershare Dr. Fone maka Android bụ ihe kasị mma na naanị omume nke na-enye ohere onye ọrụ na-agbake a dịgasị iche iche nke formats enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Usoro naghachi data iji Wondershare Dr. Fone maka Android e kọwara dị ka n'okpuru ma ọ bụ na-ahụ kwuru na foto na-setara dị ka ihe atụ nke mere na usoro nwere ike kọwara mfe:
1. Site URL http://www.wondershare.com/data-recovery/android-data-recovery-guide.html onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na faịlụ nke usoro ihe omume na-ibudatara na arụnyere. Ozugbo mere usoro ihe omume a ga-oru. Ozugbo ọ e mere ekwentị bụ ike jikọọ kọmputa mere na usoro ihe omume na-achọpụta rụọ ya:
2. Na android ngwaọrụ ụzọ a ga-agbaso bụ Ntọala "> pịa" Ngwa "> pịa" Development "> ego" USB debugging "n'ihu:
3. Ihe omume ga-ahụ nyochaa ngwaọrụ:
4. The faịlụ ụdị na Doppler mode na-ahụ na-ahọrọ iji jide n'aka na ihe omume wee na-arụ ọrụ:
5. The scanning mode bụ mgbe ahụ na-ahọrọ:
6. Ozugbo ọzọ button a pịrị Doppler dị ka mode họrọ ga-amalite na-eme ka n'aka na faịlụ na-gbakee. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka họrọ faịlụ a ga-natara wee jiri naghachi button ime needful na-akwụsị usoro:
Olee otú weghachite ehichapụ faịlụ site niile mobile ebe nchekwa kaadị?
Na mara na ọkaibe interface Wondershare Data Recovery bụ doro anya na ihe kasị mma omume nke jide n'aka na needful a mere n'ime oge ọ bụla ma ọlị mgbe ọ na-abịa data mgbake. Ọ bụ usoro ihe omume nke e kpọmkwem mepụtara site na Wondershare iji jide n'aka na ndị ọrụ niile klas nwere ike na-kacha erite uru site ọrụ. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ bụghị nanị chọtara ya mfe iji usoro ihe omume ruru kenkwukorita okirikiri nhọrọ ukwuu ma usoro ihe omume dịkwa nnọọ irè na-eme ndị needful enweghị ihe ọ bụla nkwụsị. E nweghị ndị na chinchi ma ọ bụ adịghị ike n'ime usoro ihe omume dị ka Wondershare mmepe otu dị irè upgrading usoro ihe omume. Usoro ihe omume na-akwado niile OS na Ya mere ọ na-eme ka n'aka na cross n'elu ikpo okwu mgbake na mgbe ahụ nyefe e mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Na nke kacha mma ọ na-gwara na-aga site usoro n'okpuru iji nweta nsonaazụ:
1. The njikọ na-bụ a ga-agbaso bụ http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html mere na usoro ihe omume ebudatara na ulo oru
2. The faịlụ ụdị bụ ihe a ga-ahọrọ na-esote larịị ma ọ bụ interface na-egosi:
3. The ọnọdụ site ebe nlaghachie a chọrọ bụ mgbe ahụ na-kpọmkwem:
4. Ozugbo natara faịlụ na-egosipụta mgbe Doppler chọrọ ndị a ga-ahọrọ ime ka n'aka na naghachi button na-enwe iji weghachite mgbe ahụ na imecha usoro:
Best ebe nchekwa kaadị maka mkpanaka ngwaọrụ
E nwere ọtụtụ iri puku ndị obodo na mba ụdị na Nlụpụta ngwaọrụ mkpanaaka kaadị na-ọrụ isi mmasị na ya. Na-esonụ bụ ụfọdụ ndị kasị mma ụdị na a ga-atụle mgbe eme ka a zuo na nke a:
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Olee naghachi ehichapụ faịlụ site na kaadị ebe nchekwa dị mobile